Android အတွက်အခမဲ့ Fire Game ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » အခမဲ့မီးသတ်ဂိမ်းကို Android များအတွက် Download
အခမဲ့မီးသတ်ဂိမ်းကို Android APK ကိုများအတွက် Download
အခမဲ့မီးသတ်ဂိမ်း APK ကိုအင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ထိပ်တန်းဂိမ်းဖှံ့ဖွိုးတိုးကုမ္ပဏီကတီထွင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ရှင်သန်မှုသေနတ်သမား app ကို Android နှင့် iOS နှစ်မျိုးစလုံးကို device များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်ရှင်သန်မှုအမျိုးအစားတစ်ခုလုံးဝသစ်ကိုဖြည့်စွက်သည်။ ဤအမြိုးအစားအများစုဂိမ်းမှာတော့ကျနော်တို့ဖုတ်ကောင်ဂိမ်းနှင့်တူသောကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီဂိမ်းရဲ့ entry ကိုအတူ, ဒီအမျိုးအစားအားလုံးကိုဂိမ်းရဲ့ standard စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။
ကိုယ့်အရှိဆုံးကတခြားစစ်တိုက်ဂိမ်းကဲ့သို့အသုံးပြုသူအခြားလူအားဖြင့်စည်ပင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိလေယာဉ်ပျံများနှင့်ပြည်မှခုန်လိမ့်မယ်။ သငျသညျဆင်းသက်ပြီးတာနဲ့, သင်ပြီးတော့လက်နက်တွေ, ခဲယမ်းမီးကျောက်များနှင့်ပင်အနာပျောက်စေနိုင်သောပစ္စည်းများတွေ့ပါ, ကျွန်းလေ့လာစူးစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကတကယ်တော့တော်တော်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်သင်မြင်မည်သူမဆိုရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ဂိမ်းထဲမှာနောက်ဆုံးကနျြရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ရမည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးရိုးနှင့်လောက်မရှိတဲ့လွယ်ကူသောအသံနေစဉ်, ဒါမဟုတ်ပါဘူး။ သင်သည်အခြားဂိမ်းထဲမှာအကြောင်းကို 100 ကစားသမားအစအဦးမှာရှိပါတယ်သတိပြုမိကြပေလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤဂိမ်းသာ 50 ကစားသမားနှင့်အတူချွတ်စတင်သည်။ အဆိုပါလေယာဉ်ပျံသင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ရှိရာဂိမ်းထဲမှာစတင်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလက်နက်များနှင့်အခြားသူများကိုအနိုင်ယူရန်လိုအပ်သောသည်အခြားပစ္စည်းများကိုတွေ့ရှိရန်အကြောင်းကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
မူလတန်းများအတွက် 2, 1 ပစ္စတိုနှင့် 1 Mele - အဆိုပါကစားသမားလေးလက်နက်ကို slot နှစ်ခုရပါလိမ့်မယ်။ တိကျတဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ, သငျသညျ, မီး, ခုန်, Sprint, ဒါမှမဟုတ်အောက်မှာ SIM နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကိုထိခိုက်နေတယ်ဆိုရင်, သင် medkit ခလုတ်ကိုသုံးပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ, များစွာသောကစားသမားထိန်းချုပ်မှုရှုပ်ထွေးတှေ့ရသျောလညျးသငျကစားရန်ဆက်လက်အဖြစ်, သင်ကနေသားတကျရပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်အပေါ်သင်တစ်ဦးအားသာချက်ကိုပေးမည်ဖြစ်သောဦးထုပ်များနှင့်သံချပ်ကာခိုးယူဖို့ပစ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရှိသည်ကို item ပေါ်တွင် မူတည်. သငျသညျအလှည့်အတွက်တဦးတည်းကိုခိုးယူနိုင်ပါတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၏ပမာဏကိုတိုးပွားစေရာ, သင့်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကျောပိုးအိတ်များအဆင့်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
ဒီအားသာချက်နှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူရှေ့ဆက်နိုင်ပါ။ သင်ကစားပွဲထဲမှာတိုးအဖြစ်, သင်ကဘေးကင်းလုံခြုံဇုန်မြင်လိမ့်မည်။ ဒါကအဖြူစက်ဝိုင်းများကပြသနေသည်။ အဆိုပါကစားသမားကကျုံ့မတိုင်မီဤစက်ဝိုင်းထဲသို့ဝင်ရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်လျှင်, သင်အချိန်ကျော်ဖြစ်ကြသည်။ ဤနေရာတွင်ထိုအရပ်၌အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားဂိမ်းထဲမှာရရှိနိုင်ယာဉ်များရှိပါတယ်။ သင်ကဘေးကင်းလုံခြုံဇုန်မှအလျင်အမြန်ပြောင်းရွှေ့ရန်ဤမှပေါ်ခုန်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင်လုံခြုံဇုန်ရန်သင့်လမ်းစေအဖြစ်သင့်ပြိုင်ဘက်ထိမှန်ခြင်းနှင့်သတ်ပစ်သောဤမော်တော်ယာဉ်များကိုသုံးနိုင်သည်။
အခမဲ့မီးသတ်ဂိမ်းမှာတော့သင်ဟာဆုရှင်ပေါ်ထွက်လာသကဲ့သို့ဂိမ်းထဲမှာရှိသမျှကိုထိန်းချုပ်မှုနားလည်ပြီးကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျတိုက်ခိုက်မှု, ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမုသားနှင့်ဘဲများအတွက်ထိန်းချုပ်မှုသင်ယူအသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။ သင်ကွဲပြားခြားနားသောထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြု. အဆင်ပြေမဟုတ်လျှင်သင်ကိုယ်ပြိုင်ဘက်များအတွက်လွယ်ကူသော, kill လုပ်နေပါတယ်။ မြေတပြင်လုံးတွင်ထိန်းချုပ်မှုသင်ယူဖို့အလွန်ခက်ခဲမဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဂိမ်းများကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ကစားခြင်းဖြင့်သင်အလွယ်တကူသူတို့ကိုကျွမ်းကျင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဂရပ်ဖစ်နှင့်စပ်လျဉ်းအခမဲ့မီးဂိမ်း APK ကိုရဲ့ဂရပ်ဖစ်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ သို့သော်ကျနော်တို့ကအလွန်အထင်ကြီးဆိုမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ High-spec app ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ကစားသမားတွေပိုကောင်းဂရပ်ဖစ်ဂိမ်းတာပိုကောင်းသလိုခံစားပေးကွောငျးတှေ့နေစဉ်, များသောဒီမှာဂရပ်ဖစ်ကြောင့်ထိခိုက်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီဂိမ်းလယ်ပိုင်း spec ဖုန်းများမှအနိမ့်အဘို့စုံလင်သည်။ ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနဲ့အခြားအရှေ့တောင်အာရှကစားသမားများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခမဲ့မီးသတ် Android နဲ့ iOS ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှအကောင်းဆုံးရှင်သန်ရပ်တည်ရေးသေနတ်သမားဂိမ်းအကြားဖြစ်ရေတွက်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို session တစ်ခု 10-မိနစ်ကြာမြင့်စွာနှင့်သင် 49 အခြားသူများကိုဆန့်ကျင်သင့်အသက်တာများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာဝေးလံသောကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာကြာရှည်ခံသည်။ အဖြစ်မကြာမီကစားသမားသူတို့ရဲ့လေထီးနှင့်အတူဆင်းသက်အဖြစ်မိမိတို့ Starting Point သို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အများစုမှာကစားသမားအဖြစ်ကြာမြင့်စွာတတ်နိုင်သမျှများအတွက်လုံခြုံဇုန်အတွင်း၌နေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ သင်, မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်မြက်ပင်အောက်မှာဝပျ, ဒါမှမဟုတ်မြောင်းအတွင်းပုန်းအောင်းနေဖြင့်ခါနာန်ပြည်ကိုစူးစမ်းနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ snipe သို့မဟုတ်ကင်းထိုးနိုင်သည် - သင်သာသူတို့ကို၏နောက်ဆုံးရှင်သန်ရန်ရှိသည်။
ဤတွင်, သင်တိုက်ပွဲများအတွက်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအလျင်အမြန်ရရှိနိုင်ပါလက်နက်များကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ပြဇာတ်ဇုန်ထဲကနေပါနှင့်, သင်၏ရန်သူတို့ကိုတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းပစ်မှတ်ထား။ သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာများကိုလည်းသိမ်းယူနှင့်ဂိမ်းအတွက်နောက်ဆုံးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူလူတဦးဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ကဒီဂိမ်းထဲမှာနောက်ထပ် AirDrop အဘို့အသွားအဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကျုံ့လုံခြုံဧရိယာနှင့်နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ timer နေရာမှာအပေါ် ticking နှင့်အတူကစားသမားစိုးရိမျရ။
အသစ်မသေဘဲကျန်ရစ်သူနောက်ပိုင်းမှာဂိမ်းထဲမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဤသင်နောက်ဆုံးအနည်းငယ်လက်ဝဲရပ်တည်မှုအကြားရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်တို့သည်လည်း4ကစားသမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖန်တီးသူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်စတင်နိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးတည်းဆော့ကစားချင်ကြဘူးလျှင်, ဤသင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်ပင်သူစိမ်းတွေနဲ့ကစားရန်အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းပါ!
ဂိမ်းကစားရန်အလွန်ပျော်စရာပေမယ့်အချို့ကြောင့်အငယ်လေးတွေ impact မယ်လို့ဘယ်လိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဒါဟာပြေးမောင်း, shoot နှင့်အထူးသဖြင့်ကို item သုံးစွဲဖို့ထိန်းချုပ်မှုနားလည်ပြီးသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ အဆိုပါမြေပြင်အနေအထား, အဆောက်အဦးများ, နှင့်အထွေထွေနောက်ခံကားအများစုအဝါနုရောင်ရှိသောသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူဂိမ်းရဲ့ဗေဒနီးပါးစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်မဒီဂိမ်းထဲမှာလူတစ်ဦးကျန်ရစ်သူကြာဖြစ်ခြင်းနှင့်တကွကြွလာသော adrenaline-အလုအယက်ငြင်းပယ်ရှိသေး၏။
app ကိုလူသားမြားသသေနတ်နှင့်အသေသတ်ခြင်းကိုသွေးထွက်ခံပြသပြီးကတည်းက, များစွာသောငယ်ရွယ်ကလေးတွေကိုဂိမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်သင့်ကြောင်းခံစားရသည်။ သင်တို့သည်လည်းအဆက်မပြတ်ထိုကဲ့သို့သောဒါပေါ်မှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ, အဝတ်အစား, ဇာတ်ကောင်, ဆံပင်ပုံစံတွေ, သော In-app ကိုပစ္စည်းများ, ဝယ်ယူရန်ကြော်ငြာများနှင့်တရစပ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအစသူစိမ်းမစ်ရှင်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှငျ့ဆကျသှယျဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာမိဘကြီးကြပ်မှုမပါဘဲလေးတွေဘို့အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, တကတော်တော်ပျော်စရာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကပါပေးကမ်းခြင်း၌မခိုအဲဒီမှာပါ! ဒါကြောင့်တစ်ဦး 18 + ဂိမ်းကြောင်းသတိပြုပါပါနဲ့။
ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်ကိုသင်ဖို့အလွန်အမင်းအရေးကြီးလှသည်လျှင်, သင်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုဒီဂိမ်းသင်တို့အဘို့မဟုတ်ကြောင်းကြိုတင်သတိပေးခဲ့သည်ရပါမည်။ သို့သော်ဂိမ်းဖို့ထိန်းချုပ်မှုကနေဂိမ်းချောချောမွေ့မွေ့ရှေ့ဆက်လှုံ့ဆျောနှငျ့သငျအတှေ့အကွုံမြားနှငျ့ပျြောရှငျဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီအမျိုးအစားမှမိတ်ဆက်စကားအဘို့ကြီးစွာသောဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
Gangstar ဂတ်စ် | ...
အခမဲ့မီးသတ်ဂိမ်း Download အခမဲ့မီးဘေး အခမဲ့မီးသတ်ဂိမ်း အခမဲ့မီးသတ်ဂိမ်းကို Android အခမဲ့မီးသတ်ဂိမ်း Apk